च्याम्पियन केटो- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
हिमेश पन्तले रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’को उपाधि चुमे । उनी कसरी सफल भए ? अब के गर्दैछन् ?
चैत्र ७, २०७६ गोकर्ण गौतम
यस्ता कयौं पेचिला व्यंग्यले हिमेश पन्तको छवि अलग र विशेष बनेको थियो, ‘कमेडी च्याम्पियन’मा । तर, उनी आफैं उपाधी जित्नेमा ढुक्क थिएनन् । शोमा एकसेएकप्रतिभाशाली प्रतियोगी जो थिए । उत्कृष्ट पाँचसम्म पुगेपछिचाहिं उनलाई लागेछ, ‘च्याम्पियन त मै हो ।’ किन ? हिमेश भन्छन्, ‘कन्टेन्ट र पर्फमेन्समा मैले अचाक्ली मेहनत गरेको थिएँ । जसले ममा प्रचुर आत्मविश्वास बढाएको थियो ।’ नभन्दै हिमेश शोको पहिलो संस्करणको विजेता बने । भलै उनी भन्ने गर्छन्, ‘उपाधी जितेपछि मैले २५ लाख र कार पाउने भएँ । बाँकी मैले गर्नुपर्ने संघर्षचाहिं उस्तै हुन्छ । बरु जिम्मेवारी थपिएको छ ।’
त्यसो त शोमा भाग लिनुअगावै हिमेश युट्युबमा परिचित थिए । सुरुमा आफ्नै युट्युब च्यानल खोलें, छोटा कमेडी भिडियो बनाएर अपलोड गरे । हल्काफुल्का भ्युज बटुल्न थाल्यो । त्यतिबेला उनको कमेडी युवा पुस्ता लक्षित हुन्थ्यो । पछि ‘कमेडी सर्कल’ नामक स्ट्यान्ड–अप कमेडीको प्लेटर्फममा जोडिए । यसबाट उनको लोकप्रियता अझ बढ्यो, स्ट्यान्ड–अपमै भविष्य देखे । भन्छन्, ‘बिस्तारै मलाई हसाएर मात्र हुन्न, विकृतिमाथि कटाक्ष गर्नुपर्छ बोध हुनथाल्यो । त्यसैले सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्न थाले ।’
हिमेशको मुख्य विशेषता नै उनको कमेडीमा समाज–चेत हुनु हो । जहाँ हसाउनका लागि मात्र हसाइएको हुन्न, सन्देश र सवाल पनि हुन्छ । ‘हास्यलाई हामीले भोगिरहेको तीतो–मिठो यथार्थसँग जोड्‍न सकियो भने मात्र त्यसको आयु लामो हुन्छ,’ उनले आफ्नो बुझाई सुनाए ।
उपाधी जित्ने अभिलासा त छदै थियो, त्यो भन्दा बढीचाहिं आफ्नो प्रतिभा पस्कने र नयाँ कुरा सिक्ने चाह बोकेर हिमेश ‘कमेडी च्याम्पियन’मा पुगेका थिए । शोमा अघि बढ्दै जादा ती चाहनाहरु पुरा हुँदै गए । कन्टेन्ट चयन र प्रस्तुतीकरणका नयाँ तरिका सिके । ‘थाहा नभएको कुरा सिक्ने मोहकै कारण म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ,’ हिमेशले भने । केही समयमा अन्य दुई फाइनलिस्ट सुमन कोइराला र खड्गबहादुर पुनमगरसँगै उनी ‘वर्ल्ड टूर’मा निस्कदैछन् । ‘कमेडी च्याम्पियन’कै निर्माताको नयाँ रियालिटी जोमा उनको पनि सहभागिता हुनेछ । आफ्नो युट्युब च्यानलका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्दैछन् । ‘जे गर्छु, कमेडीमै गर्छु,’ उनले भने ।
कतिपय रियालिटी शोका विजेताहरु शो सकिएसँगै ओझेलमा पर्छन् । आफ्नो मौलिक छवि बनाउन सक्दैनन् । हिमेशलाई यसको हेक्का नभएको होइन । तर, गायन वा नृत्यभन्दा कमेडीमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन सहज हुने भएकाले यस क्षेत्रमा हराउने सम्भावना कम हुने बताउँछन् उनी । गीत निकाल्न, म्युजिक भिडियो बनाउन टन्न पैसा लाग्छ तर क्यामेराको जोहो भयो भने कमेडी भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्न उतिविघ्न खर्च लाग्दैन् । युट्युबबाटै आम्दानी गर्न सकिन्छ । ‘आफूमा क्षमता छ भने कमेडीमा चाहिं पछि परिन्न । एकल प्रयासमै अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ हिमेश भन्छन्, ‘मेहनत गरिएन भने त जहाँ पनि पछि परिन्छ, कमेडीमा पनि त्यही हो।’
टेलिभिजन र युट्युबमा मात्र होइन, फिल्ममा पनि हास्यकलाकारकै जगजगी छ अहिले । हिट फिल्मको सूची हेर्दा कमेडीकै पल्लाभारी हुन्छ । शो जितेसँगै हिमेशको चर्चा चुलिएको छ । भिडियोमा धेरथोर अभिनयकला पस्किसकेका छन् । फिल्म खेल्ने योजना छैन ? उनले मुस्कुराउँदै भने, ‘छ तर त्यसअगाडि मैले मेरो अभिनयमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेछ । लहडमा होइन, सिकेर मात्र फिल्म खेल्छु ।’ जहाँ कला देखाए पनि स्तर खस्कन नदिन प्रतिबद्ध छन् उनी । झाराटार्ने ढंगले काम गर्दा किनारा लागेका धेरै कलाकार देखेकाले आफू त्यही हुलमा मिसिन चाहँदैनन् । ‘मलाई धेरै होइन, स्तरिय कला पस्कनुछ । त्यसमाथि कमेडीमा त हरेक पटक केही न केही नयाँ गनैपर्छ । एउटा जोकमा दुई पटक कोही हाँस्दैनन्,’ हिमेशले यथार्थ सुनाए ।
शोकै दौरान हिमेशले मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि ‘ट्रायल’ दिए तर फेल भए । च्याम्पियन बनेसँगै उनले कार पनि पाएका छन् । हाँस्दै भने, ‘भाग्यमा कार लेखेको रहेछ, मचाहिँ बाइकको लाइसेन्स लिन दौडिएछु । अब एकैपटक कार चलाउनै सिक्ने हो ।’
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ १५:४७
चैत्र ७, २०७६ कुम्भराज राई
नेपालमा दर्जनौं अल्ट्रा (ट्रेल) रेसको आयोजना हुन्छन् । त्यसमध्ये गत साल सुरु भएको दौड हो, खिजिदेम्बा अल्ट्रा म्याराथन । पहिलो संस्करण सोलुखुम्बुको पिकेदेखि ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको केन्द्र खिजिफलाँटेसम्म २१ किलोमिटर (हाफ म्याराथन) दौडाइएको थियो । यस वर्ष बढाएर ४२.१९५ कै पूर्ण म्याराथन बनाइयो । रुट थोरै परिवर्तन भएको छ ।
समुन्द्री सतहदेखि २,२०० मिटरको उचाइमा अवस्थित खिजिफलाँटे बजारबाट सुरु भएर जिल्लाकै अग्लो डाँडा थोलेदेम्बा हुँदै ताक्लुङबाट दम्साइलो उकालो भएर सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने भुलभुले पुग्नुपर्छ । भुलभुलेबाट फर्किएर फेरि खिजिफलाँटे आइपुग्दा ४२ किलोमिटर पूरा हुन्छ । थोलेदेम्बालगायतका डाँडाहरु छिचोल्दा समुन्द्री सतहदेखि अधिकतम ३,५०० मिटर हाराहारीको उचाइमा खेलाडीहरू दौडिन्छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलिँदो त्रासकबीच यसपाली १९ फागुनमा सम्पन्न भयो । यसमा महिला र पुरुष गरी ३५ जना नेपाली धावकधाविकाहरु दौडिए । ‘ठिक्कको अल्टिच्यूड, चिसो मौसम, उकालो, ओरालो र तेर्सो सबै किसिमको भूगोलले गर्दा यस्तो अल्ट्रा रुट अन्त देखेको छैन,’ खिजिदेम्बा म्याराथनका लगातार दुइर् पटकका विजेता भिमबहादुर गुरुङले भने, ‘यसलाई थप व्यवस्थित गरी प्रचार गर्न सके संसारकै उत्कृष्ट अल्ट्रा म्याराथन रुट बनाउन सकिन्छ ।’
अर्का धावक दुर्गाराज बुढामगरले यो रुटमा दौडिँदा यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता हेरेरै थकान महसुस नहुने प्रतिक्रिया दिए ।
जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले म्याराथनको सुरुवात गरिएको हो । ओखलढुंगा पर्यटन विकास समितिले आयोजना गरेको म्याराथनमा महिलातर्फ लगातार दुई वर्ष नै स्थानीय धावकले कडा प्रतिस्पर्धा दिइरहेका छन् । यसले गाउँगाउँमा दौडिने संस्कारको विकास भएको छ । यसपाली पुरुषतर्फ भीमबहादुर गुरुङ र महिलामा रोजिना भण्डारी विजेता भए । आउने संस्करणमा आयोजकले विदेशी धावकहरूलार्य पनि सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ १५:४०